Home ASIAN FOOTBALL STORIES Aleksandr Golovin Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Cusboonaysiinta ugu dambeysay July 22, 2018
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Full of Genius Football kaas oo si fiican u yaqaan naaneyska; "Chick". Sheekadayada Ilmaha Aleksandr Golovin iyo Warka Xogta Aan Bixin Karin waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor inta caan ka ah, asalka qoyska, nolosha xiriirka, iyo xaqiiqooyin kale oo caddayn ah oo caddaynaya (wax yar).
Haa, qof walba waa ogyahay inuu qeyb ka ahaa kooxda Ruushka ee koobka adduunka ee 2018. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah oo kaliya ayaa tixgelinaya Aleksandr Golovin's Bio kaas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Aleksandr Golovin Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan -Nolosha Hore
Aleksandr Sergeyevich Golovin wuxuu ku dhashay 30th May 1996 hooyadiis, Svetlana (xisaabiye) iyo Aabe, Sergei Golovin (macdan) Kaltan, Russia.
Golovin wuxuu ku koray walaalkiis, Ivan ee Kaltan, isla magaalada uu ku dhashay. Kaltan waxaa loo yaqaanaa in ay ahaato mishiinka macdanta iyo warshadaha waaweyn oo bixiya shaqooyin badan oo ka jira gobolka gobolka ee Ruushka.
Golovin wuxuu lahaa waqti badan oo farxad leh oo uu sii korayo aabihiis isagoo jooga barbaarinta. Kadib markaa ilmo ahaan, wuxuu ahaa mid si khaas ah u jecel yahay inuu la ciyaaro aabihii aabihii macdanta sida sawirka sawirka hoose.
Golovin ayaa markii ugu horeysay xiriir la leh kubada cagta, waxaana uu ka yimid kubbadda cagta, oo ah ciyaar aan ogeyn xuduudaha Russia.
Inkastoo uu soo jiitay kabtanka, Golovin ayaa jeclaa inuu kubada cagta u ciyaaro waqtigii uu caruur ahaa. Markii ugu horeysay ee xiriir toos ah la leh xiriirka kubada cagta markii uu ahaa 6, waqti ayuu aabihiis geeriyooday Aleksandr Plyasunov, oo shaqaale ka ahaa iskuulada Isboortiga ee Kaltan iyo dhalinyarada. Iyadoo Golovin loo diiwaangeliyay Isboortiga Isboortiga, Plyasunov wuxuu noqday tababaraha koowaad ee Golovin. Sheekadiisa mustaqbalkiisa iyo sida uu u soo kordhay magaciisu waxaa laga helayaa qaybta dambe ee qodobkan.
Aleksandr Golovin Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan -Nolosha Xiriirka
Xiriirka xiriirka Golovin waa mid xiiso leh, haddii aan caadi ahayn. Waa mid ka mid ah wiilka soo jiidashada leh ee tagay dadweynaha si uu u sheego taageerayaashiisa isafgaradkiisa iyo baahida loo qabo lamaane. Golovin waa mid ka mid ah ciyaartoy dhowr ah oo dhab ahaantii xayeysiiya noloshiisa gaarka ah sida uu ku sameeyay rikoorka Ruushka Vk website.
Gadaashii Golovin oo guulaysatay, waxaa soo baxday nin saaxiibo ah oo jilicsan Angelina Vaschenko, sawir hoos ku qoran.
Labada Golovin iyo Angelina Vaschenko ayaa isku wada jira tan iyo bilowgii hore ee CSKA Moscow oo ku soo laabatay 2016. Labadaba jacaylka ayaa aad ugu roon midba midka kale oo muujinaya daacadnimada Golovin ee baahida uu u qabo xiriir adag. Labadaba jecel yihiin waxay ku nool yihiin si farxad leh iyagoo daanyeerka xayawaanka ah.
Sida Angelina Jolie oo kale sida kale ee Ruushka, waxay jeceshahay inay tusiso ninkeeda. Waxay noqotey shidaalka uu u leeyahay go'aankiisa uu ku leeyahay garoonka. Hoos waxaa ku yaala Golovin walaalkiis Ivan iyo saaxiibkiisa, Anika.
Aleksandr Golovin Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan -Nickname
Golovin waxaa la siiyay naaneyska "Chick"Sababtoo ah dhismihiisa yar yar iyo muuqaalka-dhalaalka oo leh wax la mid ah kan Paulo Dybala. Inkastoo uu muuqaalkiisa ka muuqanayo, Ruushka ayaan wax muujineynin calaamadaha daciifnimada garoonka dhexdiisa. Waxaa mararka qaarkood loo yaqaan "Dilka Qofka Dhaawaca ah".
Kulamada uu jecel yahay wali waa uu joogayaa "FIFA"Iyo"Dota-2. "
Golovin waa u naxariis badan, kalgacal, ufilan, la qabatimay oo awood u leh inuu si dhakhso ah wax u barto.
Golovin wuxuu necbahay kali ahaanshaha, isagoo xiran. Inaad kaligaa ahaato inaadan kaligaa aheyn ayaa ahayd sababta uu ugu soo baxay dadweynaha oo ku saabsan baahida saaxiibka.
Aleksandr Golovin Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan -Sida uu u baranayey kubada cagta
Sanadkiisii ​​ugu horreeyay ee akadeemiyadda, Golovin wuxuu ahaa bartilmaameedka inuu bartilmaameed ka dhigto goobta si fudud markii ugu horreysay loo baray sida loo isticmaalo labada lugood. Sida tababarihiisii ​​ugu horeeyay ee uu ku sheegay wareysiga Sports.ru;
Alexander Aleksandr Golovin wuxuu ii sheegay inuu jecel yahay inuu noqda mid taageera. hE wuxuu ku riyooday inuu ka ciyaaro xulka qaranka Ruushka laga bilaabo caruurnimadiisa.
Qoraalkan ayaa sii watay baahida loo qabo inuu ciyaaro kubad ciyaaro oo badan, taasoo la micno ah inuu u wareegayo koox weyn oo dhalinyaro ah. Mid kale si loo hagaajiyo, Golovin waa inuu daawado qaababka khadka dhexe ee kale. Inkastoo uu ahaa weeraryahan, modelkiisa ayaa ahaa Luka Modrić, Xavi iyo Andrés Iniesta.
Da'da 12, Golovin iyo aabihiis, Sergei waxay u aadeen magaalada Moscow si ay u tijaabiyaan Spartak. Xumayn, ayuu ku guuldareystay tijaabooyinka sababtoo ah waxa loo arkay inuu yahay mid aad u yar, daciif ah oo aan waxtar lahayn. Diidmada ayaa jabisay rajadiisa ah inuu noqdo ciyaaryahan xirfadle ah. Si kastaba ha ahaatee, Golovin ayaa weli go'aansaday, isaga oo rumaysan inuu weli wadi doono. Dhibaatada tijaabada ah ayaa keentay inuu ku laabto Kaltan halkaas oo safarkiisa kubadda cagta uu bilowday. Inkasta oo uu dhaawacmay, Golovin ayaa ku adkeysanaya sidii uu sii waday tababarkiisa kooxdiisii ​​hore ee dhalinyarada. Intii uu tababartay, waxa uu tagay tijaabooyin kale, mid ka mid ah kuwaas oo si guul leh u soo baxay. Golovin waxaa laga aqbalay dugsiga Metallurg-Zapsib. Ka dib markii uu u ciyaaray sannadihii 2, oo kor u kaca oo ka sarreeya dhammaan dhalinyarada. Natiijooyinkii ka soo baxay, wuxuu ku daray kooxda Siberia si uu uga qeyb galo tartanka Krymsk sida hoos ku aragtay.
Tani waa halka wakiilada CSKA Moscow ay ogaadeen tayadiisa. Golovin ayaa markii ugu danbeysay heshay maxkamad ku guuleysata kooxdiisa riyada ee CSKA Moscow, halkaas oo uu ku guuleystay dhalashadiisa dhalashadiisa waxana uu lahaa xulka qaranka. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Aleksandr Golovin Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan -Nolosha Qoyska
Aleksandr Golovin waalidkiis iyo walaalkiis ayaa weli ku nool magaalada Kaltan ee gobolka Kemerovo. Wuxuu booqdaa qoyskiisa iyo asxaabtiisa magaalada 2 ama 3 sanadka gudahiisa, halkaasna wuxuu ku jiraa qiyaastii hal usbuuc. Inkastoo xataa fasax, Golovin weli wuu jecel yahay tababar.
Thanks to kubadda cagta kubada cagta, Golovin iyada oo loo marayo talada aabihiis markii ay bilaabeen barnaamij dhalinyaro ah oo lagu taageerayo tartanka kubadda cagta ee gobolka. Waxay arkeen tartan hodan ah oo abaalmarin la siiyay guuleystayaasha.
Aleksandr Golovin hooyadeed, Svetlana wuu jecel yahay Boqortooyada Ingiriiska waxaana uu rajeynayaa in wiilkeeda uu u ciyaaro Chelsea. Marka laga hadlaayo qoraalka, Chelsea waxay ku jirtaa habka loo xaqiijiyo adeegyadiisa.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantahay akhriskayaga Aleksandr Golovin Childhood Story iyo xaqiiqooyinka aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!
Taariikhda wax laga beddelay: Diseembar 26, 2019